Hurumende yeHungary Inorwisa Vashandi Vemumigwagwa Vemumhepo Vanotongwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Hurumende yeHungary Inorwisa Vashandi Vemumigwagwa Vemumhepo Vanotongwa
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hungary Kuputsa Nhau • nhau • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Vemumigwagwa vashandi vemuHungary Air Navigation Service Provider (ANSP) - HungaroControl izvozvi zvakarambidzwa kuronga chero ratidziro.
European Transport Workers 'Federation inokwidza nyaya kuEuropean Commission.
Mitemo miviri isiri pamutemo yakapihwa nehurumende yeOrban.
ETF inoshoropodza zvakanyanya kupindira kubva kuHungary Hurumende mukupa kweanofambisa nendege masevhisi.
The European Kutakura Vashandi 'Federation (ETF) vakatumira tsamba ku European Commission (EC) Mutungamiri, Ursula von der Leyen, kuna EU Commissioner for Jobs and Social Rights, Nicolas Schmit uye kuna EU Commissioner for Transport, Adina VALEAN, kukumbira chiito nekukasika kubva kuEC kumisa zvinoita kunge imwe nyaya yekutyora mutemo mutemo neHungary Hurumende uye zvakare, yakajeka mamiriro emubatanidzwa ari kuputika mukati meiyi EU Nhengo Nyika.
Ichitaura nevatungamiriri veEEC, iyo ETF inotaura kunetsekana kwayo kwakadzama maererano nemamiriro ezvinhu akaoma evashandi vekufamba nendege kuHungarian Air Navigation Service Provider (ANSP) - HungaroControl - izvo zvino zvarambidzwa kuronga chero ratidziro, pachishandiswa mirawo miviri isiri pamutemo. hurumende yeOrban.
Uku kutyisidzira kuri pachena pamusoro pevatyairi vemumhepo kubva kuHungary, ETF inotaura mutsamba yakanyorerwa maKomishina eEU. Chirevo hachirambe chete danho 2.Mpkf.35.080 / 2021/5 yeHungary Appeal Court asi zvakare inotyora Chinyorwa 28 cheCharter of Fundamental Rights dzeEuropean Union.
ETF inoshoropodza kupindira kwakadai kubva kuHungary Hurumende mukupa kweanofambisa nendege uye nekugadzirwa kwenzvimbo yebasa ine hushoma inowedzera kushushikana pakati pevashandi vemumafashamu emhepo uye zvakare inopa njodzi yakachengeteka kune vanofamba, vashandi uye vagari.